Drip Marketing Nkebi nke 1: Whonye Na-eche Banyere?
Wenezde, August 18, 2010 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Eeh, Achọrọ m ide obere nke ga - eme n'ọdịnihu n'usoro isiokwu a maka ire ahịa nta mmiri. Mana, ọbụlagodi na anaghị m eme, maa ihe: aha ka na-arụ ọrụ. Akụkụ mbụ nke mkpọsa ịzụ ahịa mmiri anaghị ekpebi ihe ị ga-ede. Ọ bụghị buru ngalaba aha ma ọ bụ ịmepụta ebe ọdịda. Ọ bụghị ịtọlite ​​kọntaktị gị ụdị na akpaaka mkpọsa. Akụkụ 1 nke mkpọsa mkpọsa ọ bụla na-achọpụta onye na-echebara ihe ị ga-ekwu echiche.
Chọpụta onye na-elekọta nwere ike ịkọwapụta nke ọma: onye ị chọrọ ilekọta. Na-anụ ya na mgbasa ozi, na ịkparịta ụka n'networkntanet, na ndị nchịkwa azụmahịa n'ebe niile - chọta niche gị. Nke a dị oke mkpa na ahịa ọpụpụ n'ihi na tupu ị daa mmiri ị ga-achọ ndu; iji nweta ndu ahụ ịkwesịrị inye ihe bara uru; kedu ka isi mara ihe bara uru ruo mgbe ịmara onye na-azụ?
Nke ahụ ziri ezi, “ịzụrụ.” Chee ya ihu, n'agbanyeghị na ị naghị agwa ha ka ha mepee akpa ha, ị na-arịọ ndị mmadụ ka ha zụta ihe n'aka gị - ikekwe ụfọdụ ọdịnaya ị mepụtara maka abamuru ha. Ugbu a, ha anaghị eji ego azụta. Ego nke na-azuta ihe omuma site n'aka ndi ahia ahia abughi dollar na cent. Ego bụ ozi kọntaktị… na onu oriri ọnụego dị elu.
Otu iko soda eji aga nickel, nri? Eziokwu, na adreesị ozi-e ziri ezi nke a na-eji abanye maka ntinye akwụkwọ ndị ọbịa (cheta ndị ahụ). Ọ bụghịkwa ọzọ. Ọ bụla atụ anya na-agagharị na weebụ na-ebu a n'akpa uwe akwụkwọ jupụtara na ha data – email address, nọmba ekwentị, na ọbụna demographics. Ndị na-arịọ maka data kọntaktị ahụ na-enweghị inye ihe ọ bụla bara uru na nloghachi dị ka ndị ogbenye ọnụahịa nke ịntanetị, na-arịọ maka ego naanị na amara nke onye nyere gị. Kama ịrịọ arịrịọ, mee nkwekọrịta ziri ezi. Nye ihe bara uru dika ndụmọdụ efu sitere n'aka ndị edemede a na-akwanyere ùgwùnwere free akwụkwọ ozi PDFnzukọ ọmụmụ ihe ma ọ bụ ihe omume n'efu, ma ọ bụ ọkacha mmasị m, ihe e-N'ezie. Na, ka ị na-achọ ịkwụ ụgwọ (ya bụ, nkọwa zuru ezu ị na-ajụ ndị isi iji nye) uru ị ga-emerịrị. Ma ọ bụghị ya, ị ga-ahụ onwe gị na-ere soda maka ụgwọ $ 10 na-enweghị ọtụtụ ndị na-ewere ya.
Ugbu a, ọ bụ akụkụ “onye” nke ihe a na-eche n’ezie na-amalite mkpa. Ihula, uru ihe ị na-enye bara uru metụtara onye ị na-enye ya. Ọ bụrụ na ịmara onye ndị na-ege gị ntị bụ, mgbe ahụ (na naanị mgbe ahụ) ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ha ga-adị njikere ịzụta na ọnụahịa nke ozi kọntaktị ha. Na isi, ị kwesịrị ị na-eji dị ka oge dị ukwuu na-emepe emepe ngwaahịa ị na-eme atụmatụ na-ere maka kọntaktị data dị ka ị na-eme ngwaahịa na ị na-eme atụmatụ na-ere maka ego. E kwuwerị, na-enweghị nke mbụ, obere olileanya dịịrị ndị nke abụọ.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eche ịmalite usoro mgbasa ozi, jụọ onwe gị "onye chọrọ ịma?" Polish elu àjà na uru ihe ị na-arịọ na nloghachi – abụla a ahịa pauper. Ma, ozugbo ha zụtara, gbaa mbọ hụ na ịnapụtara.
Tags: ahịa mkpọpu ahịa
Echiche nke ihe ọ bụla na-elekọta mmadụ? N'ezie?
Echere m na anyị na-echekarị… nke ọma, m na-echekwa ya, ka ha onwe ha kwa so. Ezi post.